विप्लव माओवादीले वामसरकारलाई विस्थापित गर्नसक्ला त ??? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
विप्लव माओवादीले वामसरकारलाई विस्थापित गर्नसक्ला त ???
काठमाडौं । पछिल्लो आम चुनावको बेला नेपाल सरकारले लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरायो । ‘कुनै पनि बेला चुनावमा असर पार्ने गरी शान्तिसुरक्षा भाँडिनसक्छ’ भन्ने चिन्ता सरकारलाई चुनावको दिनसम्मै थियो ।
सरकारले जेनतेन शान्तिपूर्ण रुपमै चुनाव सम्पन्न त गरायो । यद्यपि केही सवाल भने यसपटकको चुनावसँगै छुटेका छन् । त्यो अरु केही नभएर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि हो ।
शान्ति प्रक्रियाको लामो श्रृंखलाबाटै छुटेको यो शक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला धेरैले नजर अन्दाज गरेका थिए । तर आम निर्वाचनसँगै विप्लव समूहलाई ‘केही होइन’ भनी पेलेर जानसक्ने अवस्था देखिएन ।
भलै उनीहरुको ‘पोलिटिक स्पेश’ को संघर्ष नै हुनसक्छ, तर निर्वाचनमा विप्लव समूहले आफ्नो संगठनको समिक्षा गर्दा सफल भएको भन्ने नै छ ।
विप्लव समूहका केही स्थायी कमिटीका नेताहरुका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा उनीहरु सफल नै भएका छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा उनीहरुले जसरी राज्यलाई ‘थर्काउने’ काम गरे, त्यसले अवस्य नै राज्यलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
जो आगामी वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चासो र चुनौती बन्ने निश्चित छ । अन्तर्यमा हेर्दा विप्लव समूहको ‘पोलिटिकल बार्गेनिङ’ कांग्रेससँग नभएर माओवादीसँग नै हो । जुन अब सत्ता संचालनको तहमा पुगेको छ ।
पछिल्लो समय विप्लव समूहको शक्ति बिस्तार भएको कसरी पनि ठम्याउन सकिन्छ भने, सरकारले यसपटकको चुनावमा सबैभन्दा धेरै चासो दिएको शक्ति विप्लव समूहको माओवादी नै हो ।
चुनाव भाँड्नसक्ने शंसयका साथ सरकारले विप्लवका ६ सय भन्दा बढी कार्यकर्ता पक्राउ गर्यो । यतिसम्म कि, विप्लव निकट भनी चिनिएका पत्रकार, लेखक, कविले समेत चुनावभर हिरासतमै बस्नुपर्यो ।
रुकुम, रोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट लगायत जिल्लामा त उनीहरुले चुनाव भाँड्न आमसभा नै गरे । केही गाउँलाई चुनावमा उपस्थित नहुन उर्दी जारी गरे । तर सरकारले ति क्षेत्रमा भने विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ गर्नै सकेन । कतिपय चुनावी क्षेत्रमा विप्लवका कार्यकर्ताले खुलेआम रुपमा चुनावको विरोध गर्दै हिँड्दा समेत सरकारले पक्राउ गर्न नसक्नु विप्लवको शक्ति बलियो देखिनु पनि हो ।
यसबाहेक थुप्रै जिल्लामा बम विस्फोट गराउने विप्लव समूहका गतिविधि जे थिए, तिनले पनि उनीहरुलाई एक शक्तिको रुपमा उभ्याएको छ । विप्लव माओवादीका शिर्ष नेताहरुका अनुसार उनीहरुले चाहेरै तर्साउनका लागि मात्रै ति आक्रमण गरेका थिए । यसले के पनि प्रमाणित गर्यो भने, विप्लव माओवादीले चाहेको खण्डमा राज्यसत्तालाई ढाल्न नसके पनि हल्लाउन सक्छ ।
खासमा मधेसी शक्ति आगामी सरकारका लागि चुनौती बन्ने आशंका धेरैको थियो । यसको विकल्पमा थारु समुदाय वा जनजाती समुदायलाई पनि अर्को वैकल्पिक शक्तिको रुपमा बुझियो । तर ति अनुमान सही नभएर विप्लव समूह नै आगामी सरकारको चुनौती बन्ने देखिएको छ ।
यो जायज वा नाजायज अर्को वहसको विषय हो, तर विप्लव माओवादी सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय चाहीँ हो । जुन कालान्तरमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित पनि हुनसक्छ । तर आगामी वाम नेतृत्वको सरकारका निर्णय, कार्यनीति कति मानवीय र जायज हुनेछन् त्यसैले विप्लव समूहको पतन वा उत्थान निर्धारण गर्नेछ । – नेपालीपत्रबाट